Barcelona Oo Go'aan Ka Gaari Doonto Xidiga Amaahda Ku Jooga Real Betis Ee Emerson.
HomeWararka CiyaarahaBarcelona oo go’aan ka gaari doonto xidiga amaahda ku jooga Real betis ee Emerson.
Barcelona oo go’aan ka gaari doonto xidiga amaahda ku jooga Real betis ee Emerson.
March 14, 2021 Wararka Ciyaaraha 0
Barcelona ayaa dhawaan go’aansan doonta waxa laga yeelayo xidiga amaahda ku jooga Betis Emerson taas oo barcelona kasoo saari doonto warbixin ay ku cadeeyneyso inuu sii joogayo iyo ineey iska fasaxayaan sida ay qortay Marca.
Xiddiga reer Brazil, oo xuquuqdiisa ay wadaagaan 50 iyo 50 Labada Koox ee barcelona iyo Real Betis ayaa qaab ciyaareed fiican ku soo qaatay kooxda ay xafiiltamaan ee Catalans, laakiin qandaraaskiisa Betis ayaa soo gabagabeynaya Barca waa inay kala door bidaa bixinta si ay ugu keento Camp Nou ama lacag ay ku iibineyso xagaaga.
Kooxo ay qeyb katahay Ac Milan ayaa aad u xiiseynaya sidoo kale barcelona ayaa damacsan in ay iska iibiyaan maadama booskiisa ay u heystaan sergino Dest oo ah xidig si fiican ula qabsaday booskaas maalmaha soo socda ayaa la kala xaqiijin doonaa halka uu ka danbeyn doono.